यो कुनै हावादारी गफ वा दावी होइन । यो दावी हो वैज्ञानिकहरुको । उनीहरुले पत्ता लगाएका छन्– मौरीको विष एचआईभी र क्यान्सर जस्ता अत्यन्तै भयंकर, डरलाग्दा रोगको उपचारमा प्रभावकारी हुन सक्
खाना खाने बित्तिकै दिसा बस्न मन लाग्छ?
महिलाले श्रीमानलाई भन्नै नहुने ९ कुरा
अर्को नयाँ तथ्य : तीते करेला खानाले ‘‘यस्तो पनि हुन सक्छ !
बढी मदिरा पिउँदा किन हुन्छ ह्याङओभर ?
थाइराइडबाट यसरी जोगिन सक्नु हुन्छ
वैज्ञानिक भन्छन्ः गाई जति खुसी भयो दुध उति नै पोसिलो